Danjirayaasheena Waalidka | Boston School Finder
Boston School Finder waxa uu leeyahay koox ka kooban Danjirayaasha Waalidka kuwaasoo kala shaqeeya waalidiinta hanaanka diiwaan galinta dugsiga dhammaan bulshooyinka iyo xaafadaha Boston.
Maisha waxay qoyskeeda kula nooshahay Boston. Ayadoo ah danjiraha waalidka, waxay dooneysaa in waalidiintu oggaadaan inay jiraan dookhyo badan oo ay dugsi ugu heli karaan carruurtooda. Maisha waxay jeceshahay inay banaanka u baxdo si ay ula kulanto waalidka ayna u tusto dookhyadooda. Boston School Finder ayaa ka caawisay ayadoo galisay dhammaan dugsiyada hal webseet si ay u hesho inta badan xogta ay ugu baahnayd helitaanka dugsiga saxda ah. Luuqadaha looga hadlo: Ingiriis
Katia waxay ku nooshahay South Boston ayadoo la nool ninkeeda, gabadheeda iyo wiilkeeda. Ayadoo ah danjire waalid, Katia waxay ka shaqaysaa siday waalid badan uga caawin lahayd helitaanka dugsiga ku habboon carruurtooda, ayadoo ka faa'iidaysanaysa khibrada ay ka baratay shaqadeedii hore ee mutadawacnimada iyo xirfadaheeda turjumaada. Boston School Finder ayaa ka caawisay inay hesho xog ku saabsan nidaamka lagu helo dugsiyada iyo barnaamijyadooda. Luuqadaha Lagu hadlo: Isbaanish
Lisa waxay ku nooshahay Bariga Boston iyada iyo ninkeeda iyo saddexdeeda wiil. Maaddaama ay tahay danjire waalid, Lisa waxay jeceshahay inay waalidiinta ka caawiso helitaanka dugsiga ku habboon ilmahooda. Waxay xustay in Boston Finder School ay caawisay maxaa yeelay webseetku waa mid fudud oo isticmaalkiisu baashaal yahay.
"Waxaan ahay waalid aad u firfircoon oo ku dhex nool bulshadayda, " ayay tiri. "Had iyo jeer waxaan lahadlaa waalidiinta ay hadda carruurtu u dhigtaan dugsigaas waxaana u sheegaa inay mar kasta booqdaan dugsiga cunugoodu dhigto ka hor intaadan dugsiga dooran." Luuqada ay ku hadasho: Vietnamese
Huong waxay ku nooshahay Milton waxayna la nooshahay ninkeeda iyo labadeeda gabdhood oo da'da dugsi hoose ku jira. Ayadoo ah danjiraha waalidka, qaar kamid ah shaqadeeda ayaa ah ka caawin waalidiinta inay si qeexan u fahmaan Boston Public Schools (BPS), iyo sidoo kale dookha dugsiga iyo hanaanka isdiiwaan galinta. Ayadoo dhistay xariiro ay la samaynayso ururada bulshada u shaqeeya si ay u gaarto qoysaska ay u adeegaan, Huong waxay hogaamisay ayna fududaysay kooxo badan oo kuwa taageerada siiya waalidiinta kuwaasoo ka taageera waalidnimada, waxbarashada ilmaha aadka u yaryar, iyo waxbarashada nidaamka dugsiga BPS.
"Waa dhab in waalidiin badan oo reer Fiyeetnaam ah ay dhibaatooyin ku qabaan isku dayga ah inay fahmaan xogtaan, gaar ahaana qoysaska cusub ee hadda wadanka soo galay oo wata ilmaha yaryar," ayay sheegtay. "Waxay ogaadeen in hanaanka diiwaan galinta dugsiga iyo waqtigu ay gabi ahaanba ka duwan yihiin sida ay ahaayeen wadanka Vietnam." Maaddaama ay tahay waalid mar kasta danaynaysa tayada waxbarashada, Huong waxay ku faraxsan tahay inay la xariirto ayna la hadasho waalidiinta kale iyo ururada si ay ugala hadasho Boston School Finder. "Waxaan dooneyaa inaan taageero waalidiinta si ay u galaan webseetkaan ayna si waxtar leh ugu adeegsadaan," ayay tiri. Luuqada ay ku hadasho: Vietnamese
Shani waxay ku nooshahay Dorchester ayadoo la nool ninkeeda iyo gabadheeda da;da dugsi sare maraysa. Waxay ku raaxaysataa shaqadaan ah Danjiraha Waalidka waayo la shaqaynta waalidiinta xili hore ay kala shaqayso hanaanka ayaa ah waxa dhisaaya bulshooyinka. Shani waxay jeceshahay inay noqoto Danjire Waalid waayo waxay dooneysaa faafiso shaqada Boston School Finder si ay u caawiso qoysas badan ilaa inta suuragalka ah.
Shani waxay Shahaadada B.S. ka haysataa Cilmi Nafsiga, M.S. na waxay ka haysataa Hogaaminta iyo Maareynta Shaqaalaha, iyo 20 sano oo ay ku qabto khibrada Diiwaana galinta iyo Caawimaada Dhaqaale oo aay kasoo qabatay afar ka mid ah Kuleejyada iyo jaamacadaha Boston. Taladeeda diiwaan galinta dugsiga ee ku socota waalidiinta: "Xili hore billoow oo ahoow mid diyaarsan!" Luuqadaha looga hadlo dugsiga: Ingiriis